အနုပညာလောက Archives - Page2of 8 - Khitalin Media
PPE ဝတ်စုံဝတ်ကာ လူနာတင်ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ G ကိုတော့ မချီးကျူးပဲ မနေနိုင်ဘူး
December 5, 2020 by Khitalin Media
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာပရိ သတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက်အချစ်တွေကို အခိုင်အမာရရှိထားပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေနဲ့ မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ထားလေးတွေကြောင့် ပိုပြီးသတိထားမိလာစေတဲ့ အဆိုတော် G ကိုတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့အထူးတလည် မိတ်ဆက်ပေးစရာ မလိုတော့ပါဘူးနော်..။G ကတော့ အဆိုပိုင်းမှာ ပရိသတ်အချစ်တွေကို ရရှိထားသလို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး မကာသနကင်းတဲ့ သူမရဲ့နေထိုင်မှုပုံရိပ်လေးတွေကလည်း တကယ်ကို သဘောကျစရာကောင်းပါ တယ်နော်..။ပရဟိတအလုပ်တွေကို တက်အားသရွေ့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ G ကတော့ အခုတစ်ခါမှာလည်း လူနာတင်ကား ကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှလာပါ တယ်နော်..။PPE ဝတ်စုံဝတ်ကာ လူနာတင်ကားကိုယ်တိုင်မောင်းပြီး စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်နေတဲ့ G ရဲ့ ချီးကျူးစရာ ပုံရိပ်လေးတွေကလည်း မြင်သူတိုင်းကို စမှာပါနော်..။“အခုတလော လမ်းကြောင်းတွေ လုထွက်နေရတယ်..” ဆိုပြီး စေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကလည်း ချီးကျူးစကားလေးတွေ ဆိုထားကြပါ တယ်နော်..။ ချစ်စရာကောင်းသလို စိတ်ထားလေးလည်း … Read more
Live လွှင့်နေတုန်း မိန်းမအဆူခံလိုက်ရတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
သရုပ်ဆောင်မင်းသားချော မြင့်မြတ်ကတော့ မာန်မာနကင်းပြီး ဖော်ရွေတတ်သူဖြစ်လို့ ပရိသတ်တွေက ဝိုင်းချစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ် ။ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်က ဗီဒီယိုတွေ၊ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေနဲ့ ကြော်ငြာတွေမနားတမ်းရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မြင့်မြတ်အနေနဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို ကြိုးစားပမ်းစားလုပ်ကိုင်ခဲ့တာကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရယူနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။မြင့်မြတ်က အရမ်းကိုချောမောလှပတဲ့ချစ်ဇနီးလေးနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး သားလေးတစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မြင့်မြတ်က ချစ်ဇနီးနဲ့သားအပေါ်မှာ အစစအရာရာ တာဝန်ကျေပွန်ပြီး အိမ်ထောင်ဦးစီးကောင်းပီသစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ မနေ့ညကတော့ မြင့်မြတ်က သူ့ရဲ့Facebook Page ကနေ Live လွှင့်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့စကားတွေ တစ်ဝကြီးပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။မြင့်မြတ်က ချစ်ဇနီးကိုယ်တိုင်ကြော်ကျွေးတဲ့ ဝက်ပင်စိမ်းနဲ့ထမင်းကိုလည်း အားရပါးရစားပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ပရိသတ်တွေက မိန်းမကိုပြဖို့ တောင်းဆိုတာကြောင့် … Read more
ငါးပိ မုန်းတဲ့ မင်းသမီးလေး သံသာမိုးသိမ့် တပ်ပိုင်မြေဖြစ် သွားပြီ
December 2, 2020 by Khitalin Media
ငါးပိ မုန်းတဲ့ MRTV. 4မင်းသမီးလေး သံသာမိုးသိမ့်လည်းဆို့အောက်သွားပြီ ငါးပိကို မုန်းတော့ အစာစားရင်တောင် ဗိုလ်စာတွေပဲ ရွေးစားတာ ဆို့အောက် တာတောင် ဗိုလ်နဲ့မှ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ပါတယ်လေ သိနေတာကကြာပါပြီ အတူတူ တွဲရိုက်ထားတဲ့ပုံ မရ​သေးလို့သာ ငြိမ်နေရတာ ၁၀၀%သေချာ စေတဲ့ ပုံလေးတွေထပ်ရမှ တင်ပေးမယ် သဘောတူရဲ့လား ယူမယ့်ကျားကျားကိုလည်း ငါးပိစား မစားအရင်မေးပီးမှ လက်ထပ်နော် Unicode ငါးပိ မုနျးတဲ့ MRTV. 4မငျးသမီးလေး သံသာမိုးသိမျ့လညျး ဆို့အောကျသှားပွီ ငါးပိကို မုနျးတော့ အစာစားရငျတောငျ ဗိုလျစာတှပေဲ ရှေးစားတာ ဆို့အောကျ တာတောငျ ဗိုလျနဲ့မှ ဘာပဲဖွဈဖွဈ လိုကျပါတယျလေ သိနတောကကွာပါပွီ အတူတူ တှဲရိုကျထားတဲ့ပုံ မရ​သေးလို့သာ ငွိမျနရေတာ ၁၀၀%သခြော စတေဲ့ ပုံလေးတှထေပျရမှ တငျပေးမယျ … Read more
ခဏတွေ့တဲ့အချိန်မှာ‌လေးမှာတောင် အတွဲညီကာ အခွီတွေကပြထားတဲ့ မြင့်မြတ်၊Kညီနဲ့ ခေးဆက်သွင်တို့ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေး
November 27, 2020 by Khitalin Media
ပရိသတ်ကြီးရေ……ပီပြင်ပြီးသဘာဝကျတဲ့သရုပ်ဆောင်ချက်တွေအပြင် ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေသည်းသည်းလှုပ်ချစ်နေရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်၊ Kညီ နဲ့ ခေးဆက်သွင်တို့ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အောင်မြင်မှုတွေ အသီးသီးရရှိပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ သူတို့သုံးယောက်လုံးဟာဆိုရင် အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပြီး အခုအခါမှာ ကြော်ငြာအတူတူရိုက်ကူးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မြတ်၊ Kညီနဲ့ ခေးဆက်သွင်တို့သုံးယောက်လုံးဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အပြင် ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ Kညီတို့ကလည်း ခေးဆက်သွင်ကိုလက်တွဲခေါ်ယူကာ အတွဲညီညီနဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကူးနေကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်နော်။ အခုဆိုရင်လည်း သူတို့သုံးယောက်လုံးဟာ ‌ရှုတင်ခနနားတုန်းအချိန်လေးကို အခွီတွေလုပ်ကြကာ Tik tokဆော့နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အတွဲညီညီနဲ့ အခွီတွေလုပ်နေကြတဲ့ Tik tokဗီဒီယိုလေးကို ခေးဆက်သွင်ဟာ သူမရဲ့ Facebookစာမျက်နှာမှာ “VeVe ကြော်ငြာလေးရိုက်ရင်းမောင်နှမတွေ အကတစ်လိုင်း” ဆိုတဲ့ captionလေးနဲ့အတူ တင်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ခေးဆက်သွင်တို့ရဲ့ Tik tokလေးကြည့်ပြီး ပျော်ရွှင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကဲ…..ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Video … Read more
အဆိုတော်ရင်ဂို နဲ့ ဆောင်းဦးလှိုင် ဖိုက်ကြပြီ
အဆိုတော်ကျားပေါက် Mytelမှာသီချင်းဆိုတာကို ဆောင်းဦးလှိုင်ကစောင်း ပီးရေးထားတာကိုရင်ဂိုကလည်း နာမည်တပ်ရေးဖို့ဒဲ့မေးထားတယ် ဆောင်ဦးလှိုင်ရေးထားတဲ့အပြည့်စုံ “ မေတြေဝကြပါနဲ့ “ တစ်ခါမှ နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောသူတွေအခုနိုင်ငံရေးတအားပြောကြတယ်။ တစ်ခါမှ အနီအသင်းအတွက် သီချင်းမရေး/မဆိုသူတွေအခုရေးကြဆိုကြတယ်။ဘာကြာသေးလို့လဲ။ (ခုဘဲ အာဏာရှင်မိသားစုပိုင် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးအတွက် သီချင်းဆိုပေးပြန်တယ်)။ တချို့က နီချင်ယောင်ဆောင်တယ်။တကယ်တမ်း ကိုယ်ကျိုးရှာဖို့ဆိုရင်အာဏာရှင်တွေကို ပေါင်းစားကြပြန်တယ်။ မတွေဝေကြပါနဲ့ ဘယ်သူတရားပျက်ပျက်၊ဘယ်သူဘာလုပ်လုပ် ၊ဘာပြောပြောမိမိယုံကြည်ချက်တွေယိုင်နဲ့မသွားစေနဲ့။ သစ္စာတရားကိုလက္ကိုင္ထား။လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနီတွေအနိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။ ပြတ်သားရဲပါစေဗျား ။ ဆောင်းဦးလှိုင် ၃၁.၁၀.၂၀၂၀ Unicode အဆိုတျောကြားပေါကျ Mytelမှာသီခငျြးဆိုတာကို ဆောငျးဦးလှိုငျကစောငျး ပီးရေးထားတာကိုရငျဂိုကလညျး နာမညျတပျရေးဖို့ဒဲ့မေးထားတယျ ဆောငျဦးလှိုငျရေးထားတဲ့အပွညျ့စုံ “ မတွေဝေကြပါနဲ့ “ တဈခါမှ နိုငျငံရေးအကွောငျးမပွောသူတှအေခုနိုငျငံရေးတအားပွောကွတယျ။ တဈခါမှ အနီအသငျးအတှကျ သီခငျြးမရေး/မဆိုသူတှအေခုရေးကွဆိုကွတယျ။ဘာကွာသေးလို့လဲ။ (ခုဘဲ အာဏာရှငျမိသားစုပိုငျ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးကွီးအတှကျ သီခငျြးဆိုပေးပွနျတယျ)။ တခြို့က နီခငျြယောငျဆောငျတယျ။တကယျတမျး ကိုယျကြိုးရှာဖို့ဆိုရငျအာဏာရှငျတှကေို ပေါငျးစားကွပွနျတယျ။ … Read more
ပိုက်ဆံ သိန်း (၂၀) နဲ့ လိမ်ပြေးစရာ မရှိပါဘူး ဆိုတဲ့ မင်းခန့်ကျော်
August 31, 2020 by Khitalin Media
သရုပ်ဆောင် နေဒွေးကတော့ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း မြို့ပရိသတ်၊ နယ်ပရိသတ်အစုံရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် နေဒွေးကတော့ အောင်မြင်မှုတွေများစွာ ရရှိခဲ့သလို အမှုအခင်းပြဿနာအချို့နဲ့လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ကို သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားနှစ်ကား ဖြန့်ချီရောင်းချဖို့ ပေးခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်ကားတန်ဖိုးငွေများကို ပြန်လည် မရရှိခဲ့တာကြောင့် ငွေရေးကြေးရေးပြဿနာတွေလည်း ရှိခဲ့သေးပါတယ် နေဒွေးကတော့ သူရစရာရှိတဲ့ ငွေတွေကို ပြန်လည်မပေးအပ်သေးတဲ့ အဆိုပါ ဒါရိုက်တာ သိစေရန် သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ အခုလိုပဲ ပြောလာပါတယ် ” ကိုယ်တွေလည်း အခုတလောလှူဖြစ်နေတာဆိုတော့ ရဖို့ရှိနေတဲ့ အကြွေးသိန်း(၂၀) လည်း လှူလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်အကြွေးတောင် တောင်းပန်မှပြန်ပေမယ်ဆိုတော့ ဆိုပြီး နေဒွေးကလည်း သူ့ရဲ့အကောင့်ကနေတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် မင်းခန့်ကျော်မှလည်း ယခုလိုပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါသေးတယ် ဒါပေမယ့် အကြွေးပြန်မပေးလည်းနေပါဗျာ။ အလှူတွေလုပ်ပြီး ခက်ခဲနေတဲ့ ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေကို တတ်နိုင်သလောက် … Read more
ဖွူဖွူထှေးကိုဝဖေနျတိုကျခိုကျလာတဲ့သရုပျဆောငျမငျးခနျ့ကြျောရဲ့ အရှုပျထုပျမြားကို ဖျောထုတျလိုကျတဲ့ဟနျငွိမျးဦး
August 28, 2020 by Khitalin Media
ဖြူဖြူထွေးကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်များကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟန်ငြိမ်းဦး ဖြူဖြူထွေးကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ရဲ့ အရှုပ်ထုပ်များကို ဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟန်ငြိမ်းဦးကဲပရိတ်သတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ပိုင်ဆိုင်ရရှိထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပွင့်ပွင်လင်းလင်းပဲပြောဆိုတတ်သူတစ်ယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မင်းခန့်ကျော်ဟာ ဖြူဖြူထွေးအပေါ်ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးသို့မနေ့ကတိုင်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီးသရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ဘက်မှာလဲရုပ်ရှင်အစည်းရုံးမှာလာရောက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။​ဖြူဖြူထွေးအပေါ်မှာအမြင်မမှားစေဖို့ဝါရင့်အနု​ပညာရှင်ကြီးများကလဲဝေဖန်အကြံပြုထားတာတွေလဲတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပရိတ်သတ်အချစ်တော်ဖြူဖြူထွေးကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့သရုပ်ဆောင်မင်းခန့်ကျော်ရဲ့အရှုပ်ထုပ်များကို ဟန်ငြိမ်းဦးမှဖော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးကိုမနာလိုဖြစ်နေတဲ့ မင်းခန့်ကျော်ဆိုတာ ဒီကောင်လားသူများအကြွေးသာ မဆပ်နိုင်တာ ကလပ်မှာတော့ ဆော်လေးတွေခေါ်ပီး သာယာနေတယ်ဟ…အစကတော့ မတင်တော့ဘူးလို့ နေနေတာပရိတ်သတ်က တောင်းဆိုတော့လည်း တင်ရတာပေါ့။ နေဒွေးနဲ့သံစဉ်မောင်တို့ သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံ ရိုက်ကူးထားတဲ့ကားတွေကို အောက်ဈေးနဲ့နှိမ်ပီး ရောင်းပေးမယ်ဆိုပြီး ငွေအကျေမချေပဲ ကလပ်မှာတော့ ဘောစိအထာနဲ့သုံးဖြုန်းနေတာသာကြည့်လိုက်တော့၃၅လမ်း၃၆လမ်းက အကြွေးရှင်တွေကိုလည်းသွားဆပ်လိုက်အုံး သူများအကြွေးတွေမဆပ်ပဲရှောင်နေပြီးကိုယ်တိုင်ကျတော့ မဖြူစင် သူတော်ကောင်းကြီးလိုလို သူရဲကောင်းကြီးလိုလိုနဲ့ သူများကိုလက်ညိုးလိုက်ထိုးအပြစ်တွေလိုက်ပြော နေတာ မရှက်ဘူးလားဗျာ….ဆိုပြီးဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြလာပါတယ်။ပရိတ်သတ်ကြီးလဲဘယ်လိုမြင်လဲ ထင်မြင်ယူဆချက်လေးတွေကိုရေးခဲ့ပါဦးနော်။ Source:Han Nyein Oo Unicode ဖွူဖွူထှေးကိုဝဖေနျတိုကျခိုကျလာတဲ့သရုပျဆောငျမငျးခနျ့ကြျောရဲ့ အရှုပျထုပျမြားကို ဖျောထုတျလိုကျတဲ့ဟနျငွိမျးဦး ဖွူဖွူထှေးကိုဝဖေနျတိုကျခိုကျလာတဲ့သရုပျဆောငျမငျးခနျ့ကြျောရဲ့ အရှုပျထုပျမြားကို ဖျောထုတျလိုကျတဲ့ဟနျငွိမျးဦးကဲပရိတျသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျမငျးခနျ့ကြျောကတော့ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို ပိုငျဆိုငျရရှိထားတဲ့သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ … Read more
ဘဝဟာ လက်ဝှေ့သမားလိုပဲ ထိုးချက်မှန်ဖို့ အတွက် သူများထိုးတာကို အရင်ခံ ရတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဘဝဟာ လက်ဝှေ့သမားလိုပဲ ထိုးချက်မှန်ဖို့ အတွက် သူများထိုးတာကို အရင်ခံ ရတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး အလှူအတန်းရက်ရောပြီး လူတိုင်းအပေါ်စေတနာထားတတ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ သူမရဲ့ အလုပ်တွေ ကို အကောင်းဆုံးလုပ်နေဆဲပါပဲ။ ဝေဖန်သူတွေတစ်ချို့ရဲ့စကားတွေဟာလည်း သူမကို နည်းနည်းလေးတောင် ယိမ်းယိုင်မသွားစေဘဲ ဒီထက်ပိုပြီး ပရိသတ်တွေက အချစ်ပိုလာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း သူမရဲ့ကြော်ငြာပုံရိပ်လေးတွေအောက်မှာ သူမရဲ့စိတ်ရင်းကိုသိတဲ့သူတစ်ချို့က အားပေးစကားတွေ အများကြီးပြောခဲ့တဲ့ အပေါ် ဖြူဖြူကလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြန်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့ အရမ်းကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဖြူလေးဟာ အရင်ကထက်တောင် အလုပ်တွေပိုပြီးကြိုးစား ခဲ့နေပါသေးတယ်။ အားပေးသူပရိသတ်တွေ ကိုလည်း ” ဘဝဟာ လက်ဝှေ့သမားလိုပဲ ထိုးချက်မှန်ဖို့အတွက် သူများထိုးတာကို အရင်ခံရတယ် ဖြူဖြူပြုံးပြလျှက်ပါ ” ဆိုပြီး သူမက ပြန်လည်အားပေးခဲ့ပါ သေးတယ်။ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ဖြူဖြူလေး အလုပ်တွေအများကြီးရပြီး ဒီထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေနော်။ Happy – … Read more
August 24, 2020 by Khitalin Media
ဖြူဖြူထွေးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို ကျွန်တော်သတိထားမိတာတော်တော်ကြာပါပြီ၊ တော်လည်းတော်တယ် အောင်လည်းအောင်မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်အရပြောရရင် ဒီလိုတင်ဆက်မှုချည်းမလုပ်ပဲ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုမှာ အချက်ကျကျနဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်သာကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေရှည်တည်တံနိုင်မယ်လို့ မြင်မိတယ်လို့ဆိုတဲ့ “အကယ်ဒမီ ဦးလွင်မိုး” #LwinMoe #PhyuPhyuHtwe #SundayJournal unicode ဖွူဖွူထှေးအနနေဲ့ သူ့ရဲ့တငျဆကျမှုတှကေို ကြှနျတျောသတိထားမိတာတျောတျောကွာပါပွီ၊ တျောလညျးတျောတယျ အောငျလညျးအောငျမွငျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့အမွငျအရပွောရရငျ ဒီလိုတငျဆကျမှုခညျြးမလုပျပဲ၊ ဇာတျလမျးဇာတျကှကျတဈခုမှာ အခကျြကကြနြဲ့ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈအောငျသာကွိုးစားမယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့အောငျမွငျမှုဟာရရှေညျတညျတံနိုငျမယျလို့ မွငျမိတယျလို့ဆိုတဲ့ “အကယျဒမီ ဦးလှငျမိုး” #LwinMoe #PhyuPhyuHtwe #SundayJournal ဖြူဖြူထွေးအနေနဲ့ သူ့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကို ကျွန်တော်သတိထားမိတာတော်တော်ကြာပါပြီ၊ တော်လည်းတော်တယ် အောင်လည်းအောင်မြင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အမြင်အရပြောရရင် ဒီလိုတင်ဆက်မှုချည်းမလုပ်ပဲ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုမှာ အချက်ကျကျနဲ့ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်သာကြိုးစားမယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေရှည်တည်တံနိုင်မယ်လို့ မြင်မိတယ်လို့ဆိုတဲ့ “အကယ်ဒမီ ဦးလွင်မိုး” … Read more
သရုပ်ဆောင်အချို့နဲ့ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
August 22, 2020 by Khitalin Media
သရုပ်ဆောင်အချို့နဲ့ ပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဝမ်းနည်းမျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ ဖြူဖြူထွေး ယခု သတင်းသည် Shwe Yaung Myanmar မှ ရေးသားထားသော သတင်း ဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင် ဖြူဖြူထွေးက သွက်လက်ပြီး ဟန်ဆောင်မှုမရှိတာကြောင့် လူကြီး၊ လူငယ်တိုင်းရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက အွန်လိုင်းဆယ်လီတစ်ယောက်အဖြစ်ကနေအနုပညာရှင်အဖြစ် ကြော်ငြာနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်နေရပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက သူမကို လာရောက်အပ်နှံတဲ့ ကြော်ငြာတွေကို သူမကိုယ်တိုင် ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလက်တလောမှာတော့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ကြော်ငြာခေါ်ရိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်အချို့ကြားမှာ အထင်အမြင်လွဲမှားမှုလေးတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုအထင်အမြင်လွဲမှားမှုကြောင့် ဖြူဖြူထွေးက ဒီကနေ့ရိုက်ကွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ လူရွှင်တော်ဦးဒိန်းဒေါင်ရဲ့ဆုံးမစကားလေးကြောင့်ကန်တော့ရင်း စိတ်ထိခိုက်မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာပါ ဦးဒိန်းဒေါင်က ဖြူဖြုထွေးကို ” လူစိမ်းတွေကဘယ်တော့မှ မိသားစုထက်ဘယ်တော့မှ ပိုမကောင်းနိုင်ဘူး … Read more